डा.केसीको जीवन रक्षाको पक्षमा नेपालगन्जमा प्रदर्शन - डा.केसीको जीवन रक्षाको पक्षमा नेपालगन्जमा प्रदर्शन
डा.केसीको जीवन रक्षाको पक्षमा नेपालगन्जमा प्रदर्शन
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २२ असार, 07:33:26 AM
नेपालगन्ज । प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको मागप्रति हाम्रो ऐक्यवद्धता जनाउँदै नेपालगन्जमा पनि युवाले प्रदर्शन गरेका छन् ।
प्रदर्शनपछि स्थानीय धम्बोझी चोकमा आयोजित कोण सभालाई सामाजिक अभियन्ता नमस्कार शाह र चिरन्जिवी शर्माले डा. केसीले उठाएका माग आम नेपाली नागरिकको पक्षमा रहेको भन्दै सरकारले तत्काल सम्बोधन गरेर अनशन मुक्त गर्नुपर्ने बताए।
अनशन बस्न कर्णाली प्रदेशको जुम्ला पुगेका डा. केसीमाथी सरकारको आदेशमा स्थानीय प्रहरी प्रशासनले गरेको ज्यादतीको निन्दा एवम् भत्र्सना समेत गरिएको बांकेबाट पत्रकार अर्जुन वलीले जानकारी दिएका छन् ।
सरकारले डा. केसीको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने माग गरे। सो क्रममा उनीहरुले विभिन्न नारा लेखिएको ब्यानर तथा प्लेकार्ड प्रर्दशन गरेका थिए। प्राध्यापक डा.केसीले नागरिकको अधिकार प्राप्तीको लागि गरेको सत्याग्रहप्रति सरकारले ख्याल, ठ्ट्टा गर्न नहुने उनीहरुले बताए।
डा.केसीको माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सरकारका मन्त्रीले उल्टै अपमानजनक अभिव्यक्ती दिइरहेका छन्। मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिको नागरिक स्तरबाट समेत आलोचना हुने गरेको छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले संसदमा जवाफ दिँदै डा। केसीको अनशन लोकतन्त्रको नाममा अधिनायकवाद भएको टिप्पणी गरेका थिए।
२०७५, २२ असार, 07:33:26 AM